Saddex askari oo Turki ah oo lagu dilay gudaha Suuriya weerar madfac oo ISIS geysatay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldSaddex askari oo Turki ah oo lagu dilay gudaha Suuriya weerar madfac oo ISIS geysatay
September 7, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Taangiyada Turkiga oo ka gudbay xadka Suuriya. Sawirka: Reuters.
Istanbul-(Puntland Mirror) Saddex kamid ah askarta Turkiga ayaa la dilay afar kalena waa la dhaawacay intii lagu guda jiray isku dhac dhexmaray dagaalyahanada ISIS ee waqooyiga dalka Suuriya, sida ay sheegeen ciidamada qalabka sida ee Turkiga.
Khasaaraha soo gaaray askarta Turkiga ayaa ah kii kowaad oo ISIS kasoo gaara tan iyo markii Turkiga uu howlgalka militari ku qaaday gudaha Suuriya labo asbuuc kahor.
Bayaan ay soo saareen shalay oo Talaado ahayd, ciidamada militariga Turkiga ayaa sheegay canaasiir kamid ah ISIS in ay bartilmaameedsadeen labo kamid ah taangiyadooda oo ay ku dhufteen madfac meel u dhow magaalada Rai ee gudaha Suuriya.
Ciidamada ayaa bayaanka ku sheegay in saddex kamid ah askartooda ay ku dhinteen weerarkaas.
August 26, 2016 Qarax dhimasho sababay oo ka dhacay xarun booliis oo kutaala koonfurta-bari ee Turkiga